Munhu azive chakanaka Weather neAdhoni nokuda P3D?
mubvunzo Munhu azive chakanaka Weather neAdhoni nokuda P3D?
2 makore 2 ago #17 by andhar
Munhu unoziva chinhu chakanaka ekunze neAdhoni nokuda Prepar3D ??
2 makore mwedzi 1 apfuura #82 by Gh0stRider203
Ndine P3D, asi maitiro angu zvinoita sezvisina kukufarira .....
Chimwe chinhu Ndakaona zvakanaka chaizvo, uye chakakodzera cents ose, ndiye Rex.
Ndichiri kumbobvira akahushandisa, ndakanzwa zvinhu zvakanaka pamusoro FSRealWX. (Uye zviri pachena, izvo chokwadi I REGAI vanosarudza)
Ose P3D enderana
Ndinovimba izvi zvinobatsira!
1 gore 11 ago #509 by flightas1
FSrealWX anoshanda wakanaka.